အမျိုးသမီးများကို မြန်မာစစ်တပ်က အစီအစဉ်ရှိရှိ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ပြီး ဖုံးကွယ်ရန် ကျိုးစားမှုကို ရိုဟင်ဂျာတို့က အစီရင်ခံစာထုတ် | Kaladan Press Network
February 27, 2017 by kaladanpress
ကုလားတန် သတင်းကွန်ယက်မှ ထုတ်ပြန်သည့် “တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ သက်သေများ” အစီရင်ခံစာသည် မောင်တော ဒေသ မြောက်ပိုင်းရှိ ရွာ ၉ ရွာမှ အမျိုးသမီး ၂၁ ဦး၏ပြောဆိုချက်ကို အခြေခံထားသည်။ ၎င်းအမျိုးသမီးများသည် ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာလ စစ်ဆင်ရေးလုပ်စဉ်မှစ၍ ဘင်င်္ဂါလားဒါရှ် နိုင်ငံသို့ပြေး လာကြသူများဖြစ်သည်။ ဤမေးမြန်းချက်ကို ဘင်္ဂါလားဒါရှ် အခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီးရှေ့နေ ရာဇီယာ စူလတန်နာ နှင့် အတူ ရိုဟင်ဂျာ သတင်းဌာန- ကုလားတန် သတင်းကွန်ယက်က လုပ်ဆောင်သည်။
“ အမျိုးသမီးများက ရဲဝင့်စွာဖြင့်ပြောပြလိုက်ပါပြီ – ကမ္ဘာက ကြားနိုင်ကြပါစေ။ ”ရာဇီယာ ကဆိုသည်။
This entry was posted in Burmese, News and tagged Arakan, interviews, Maungdaw, Rakhine, Rohingya. Bookmark the permalink.
← Rohingya publish own report on systematic Myanmar Army atrocities against women and attempted cover-up
Rakhine Commission visits Bangladesh camp on fact-finding mission →